भालुवाङ बजारको भाग्य : ऐलानी जग्गामा राजधानी !:: Naya Nepal
भालुवाङ बजारको भाग्य : ऐलानी जग्गामा राजधानी !
प्रदेश ५ सरकारले भालुवाङ बजार र त्यस आसपासको राप्ती किनारले समेटेको उपत्यकालाई समेटेर स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ । यो प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ ।
स्थानीय मिलेर बजार क्षेत्रभन्दा केही माथि केही जग्गा उपलब्ध गराउने सहमति पनि गरेका थिए । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।
वामदेवको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा, अब बुधबार सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटलाई फेरि पनि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ।
सुनुवाइका केही प्रक्रिया अझै बाँकी नै रहेकोले शुक्रबार पनि गौतमको मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
गौतमसँग सम्बन्धित रिटमा अब बुधबार मात्रै सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुने भएको छ। शुक्रबार दुई सरकारी वकिल र वामदेव पक्षका केही कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।